ရှေးမြန်မာ..: ပျူ ရွှေဒင်္ဂါး
ရှေးခေတ်ဟောင်း ဒင်္ဂါးတွေကိုလေ့လာရာမှာ အကြမ်းအားဖြင့် အုပ်စုခွဲကြည့်လို့ရပါတယ်။
ပျူ ဒင်္ဂါး ( သရေခတ္တရာ ၊ ဟန်လင်း )
အထက်ပါ ဒင်္ဂါးတွေကို ရွှေ ၊ ငွေ ၊ ကြေး ၊ သတ္တု ၊ သံ စသဖြင့် အမျိုးစားထပ်ခွဲလို့ရပါသေးတယ်။ ဒင်္ဂါးတွေအကြောင်းပြန်လည် ဖော်ထုတ်ရာမှာ ဒင်္ဂါးအစစ် ဓာတ်ပုံကိုအဓိကထားပါတယ်။ ပြတ်သားကြည်လင်ပြီး အသေးစိတ်ကြည့်လို့ရအောင် အရည်သွေးမြင့်ပုံကိုသာ သုံးပါတယ်။ ရှေးဟောင်း ဒင်္ဂါးတွေဖော်ပြထားတဲ့ မြန်မာ ဆိုဒ် အတော်များများတွေ့ပါတယ်။ တချို့က ထိုင်းနိုင်ငံလုပ် ဒင်္ဂါးအတုတွေကို တင်တယ်။ တချို့က ခုနှစ် တွေမမှန်။ တချို့က ဒင်္ဂါးဖြစ်ပြီးရော ဇောက်ထိုး ပြထားတယ်။
တချို့က တော့ ဒင်္ဂါးအစစ်တွေတင်ထားတာမျိုးပါ။
အခုမြင်နေရတာ ပျူ ရွှေဒင်္ဂါးဖြစ်တယ်။ အမှတ်လက္ခဏာ တစ်ခုခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အရင် ပိုစ် ပျူ-မွန် ခေါင်းစဉ် အောက်မှာ ရှင်းခဲ့ပြီးမို့ ထပ်မရေးတော့ပါ။
Posted by ရှေးမြန်မာ at 10/27/2009
Moderntawya October 31, 2009
မှန်နန်းရာဇ၀င်ရယ် မြန်မာမင်းအုပ်ချုပ်ပုံစာတမ်းရယ် ရှိရင် တင်ထားပေးပါလား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ခု ပုံအတိုင်း ဒင်္ဂါးတစ်ခု ရှိပါတယ် ရွှေမဟုတ်ပါ ကြေးလုိ့ ထင်ရပါတယ် အတုအစစ် ဘယ်လိုခွဲ ရမလဲ သိချင်ပါတယ်
ခုပုံစံ ဒင်္ဂါးတပြားကောက်ရထားပါတယ် .. ရွှေ ကြေးမဟုတ်ပါ . ငွေ ဒါမှမဟုတ် တခြားသတ္တုဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် .. အသေးစိတ်ပိုင်းမှာ အနည်းငယ်ကွဲလွဲတာရှိပါတယ် . ပုံလိုချင်ရင် ပို့ပေးလို့ရတယ်